သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> ဂဟေဆက်အငွေ့ Extractor -> Benchtop ဂဟေအငွေ့ Extractor
XYTRONIC INDUSTRIES LTD. ဦးဆောင်သည် Taiwan ၏ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ Benchtop ဂဟေအငွေ့ Extractor အရာအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကုန်ကြမ်းကနေအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါတယ်နှင့်၎င်းတို့၏ခိုင်ခံ့ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်တာရှည်ခံဝန်ဆောင်မှုအသက်ဘို့အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ သူတို့ရဲ့ပိုရှည်ဝန်ဆောင်မှုဘဝနှင့်အရည်အသွေးအာမခံနိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့နိုင်ငံတကာအရည်အသွေးပြည့်စံချိန်စံညွှန်းနှုန်းအဖြစ်ထိပ်ဆုံးတန်းကုန်ကြမ်းကို အသုံးပြု. သည်ဤထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ကျနော်တို့ကိုသီးသန့်တက်ကြွအရောင်တွေပုံစံများနှင့်အရွယ်အစား၏ကျယ်ပြန့်၌ဤထုတ်ကုန်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့စ client ကိုရဲ့တောငျးဆိုခနှုန်းအတိုင်းစိတ်ကြိုက်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုလည်းသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး, prompt ကို service နှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေးနှုန်းလူသိများကြသည်။
ထုတ်ကုန်အဘက်ဘက်မှအထောက်အကူဟာ Thread ၏ပရီမီယံအရည်အသွေးပြည့်နှင့်အတူဒီဇိုင်းနှင့်ချယ်လှယ်သောနေကြပါတယ်။ အရည်အသွေးအစာမေးပွဲစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တစ်သာအစစ်ခံထုတ်ကုန်နာယက '' ဥပစာသည်စေလွှတ်ကြသည်သေချာစေသည်။ သင်သည်ငါတို့ထုတ်ကုန်စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
1. အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ထိထိရောက်ရောက်အလျင်အမြန် noxious အငွေ့ဖယ်ရှားပါ။
ကျပန်းဖြန့်ဝေမှုန်အရွယ်အစားနှင့်အတူ 2. Process ကိုသိပ်သည်းဆမြင့်ဖုန်မှုန့်နှင့်ဖုန်မှုန်
3. လွယ်ကူတပ်ဆင်ခြင်း, လျော့နည်းကြမ်းပြင်အာကာသ။
5. Compact ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, ရွှေ့ဖို့မလွယ်ကူ။
6. ဖုန်လေကြောင်းဦးစွာဖုန်မှုန့် removal နှင့်ဆက်နွှယ်သောဆိုင်းငံ့ခေါင်းအုပ်ကတဆင့်မြေမှုန့်အရင်းအမြစ်ကနေဆိုင်ကလုန်း separator သို့ဝင်သော။ သိပ်သည်းဆမြင့်ဖုန်မှုန့်ကိုအခြေခံကျကျအကြံပေးအဖွဲ့အတွင်းမုန်တိုင်းကြောင့်ကွဲတာဖြစ်ပါတယ်, ကျယ်စပါးကိုအရွယ်အစားဖုန်မှုန့်နှင့်ကွဲကွာနှင့်အောက်ပိုင်းအဆုံးမှာသိုလှောင်သိမ်းဆည်းအကြံပေးအဖွဲ့သို့ကျရောက်နေပါသည်, ဒဏ်ငွေမှုန်ဖုန်မှုန့်ညက်မှုန်ဖုန်မှုန့်အပေါ်ပိတ်ဆို့ကျန်ရှိနေသော, အခုန်ကူး-အိတ်ကပ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသို့မဟုတ် filter ကိုဖုန်မှုန့် removal ဝင်သော ထို hop-အိတ်ကပ်နှင့်ဆလင်ဒါရဲ့မျက်နှာပြင်, သန့်ရှင်းသောလေထုကို filter ကိုပစ္စည်းဖြတ်သန်းပြီးနောက်မြေမှုန့် removable ထဲကဆင်းသည်။ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း separator ၏ယခင်အစိတ်အပိုင်းမြေမှုန့်မှုန်အများစုကွဲကွာခဲ့သည်, ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်မြေမှုန့်ကိုမဖယ်ရှားဝန်ထုတ်ဝန်ပိုး, လျှော့ချ filtering ကိုထိရောက်မှုပိုကောင်းရာနှင့်၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုအသက်ကိုစောင့်နေပါတယ်။
ဒါဟာစက်မှုလုပ်ငန်းသူတို့အားသက်ဆိုင်သောင်စသည်တို့ဘိလပ်မြေ, ပရိုဖိုင်ဖြတ်တောက်ခြင်း, စပါး, စက်မှု processing တူကြီးများအမှုန်အရွယ်အစားနှင့်အတူမြင့်မားသိပ်သည်းဆဖုန်မှုန့်နှင့်ဖုန်မှုန်ထုတ်လုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များအလုံးစုံတို့အဘို့ရောင်းချခြင်းန်ဆောင်မှုများအပြီးပူဇော်လော့။ သင်သည်ငါတို့ထုတ်ကုန်များတပ်ဆင်သို့မဟုတ်စစ်ဆင်ရေးအပေါ်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများဆက်သွယ်နိုင်ရန်အခမဲ့ခံစားရကိုကျေးဇူးတင်ပါ။ သင်သည်ငါတို့ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်မည်သည့်ပြဿနာနှင့်တွေ့ဆုံရန်လာသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ပထမဦးဆုံးအကူအညီရလိမ့်မည်။